सेप्टेम्बर 11, 2019 सेप्टेम्बर 11, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments	आफु, खुसी
हामी आफैलाई किन प्रेम गर्दैनौं ? हामी किन आफ्नैलागि समय दिदैनौ ? हामी आफैसँग किन मित्रता गर्दैनौ ? ’cause, हामी बाह्य सुख खोजिरहेका छौं । जबकी हामी आफै ठिक छैनौ भने बाहिरी सुखले केही गर्दैन । त्यसैले हामीले आफु स्वंमलाई माया गर्नुपर्छ । हामी आफ्नै लागि पनि समय दिनुपर्छ । आफुले आफुलाई कसरी खुसी राख्ने भन्ने कुरामा पनि घोत्लिनुपर्छ ।
नोभेम्बर 21, 2018 साइन्स इन्फोटेक	1
नोभेम्बर 1, 2019 नोभेम्बर 1, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1